गृहले निकाल्यो सूचना- आइतबार सार्वजनिक बिदा ! - Birgunj Sanjalगृहले निकाल्यो सूचना- आइतबार सार्वजनिक बिदा ! - Birgunj Sanjalगृहले निकाल्यो सूचना- आइतबार सार्वजनिक बिदा ! - Birgunj Sanjal
गृहले निकाल्यो सूचना- आइतबार सार्वजनिक बिदा !
२४ आश्विन २०७६, शुक्रबार १६:५३
काठमाडौं । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको दुईदिने राजकीय भ्रमणको अवसरमा सरकारले आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ । राष्ट्रपति सी असोज २५ गते भारतको चेन्नइबाट काठमाडौं अवतरण हुँदैछन् । सी आउने दिन शनिबार परेकाले सरकारले भोलिपल्ट आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । यद्यपि सी आइतबार बिहान १० बजे चीन फर्कनेछन् ।
गृहमन्त्रालयले बिहीबार सूचना प्रकाशित गरि मन्त्रिपरिषद्को २३ गतेको निर्णयानुसार नेपालभरका सबै सरकारी कार्यालय, सङ्घ–संस्था र निकायहरू, शिक्षण संस्थाहरू विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा समेत बिदा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ । २३ वर्षपछि चीनका राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गर्न लागेका हुन् । यसअघि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउँदा पनि सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको थियो । सरकारले राष्ट्रपति सीको भ्रमणको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ ।
चिनियाँ समकक्षी सीको स्वागत गर्न राष्ट्रपति विद्या भण्डारी त्रिभुवन विमानस्थलमा आफैँ जानेछिन् । राष्ट्रपतिको सीको स्वागत गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि विमानस्थल जाने कार्यक्रम रहेको सरकारले जानकारी दिएको छ । आइतबार बिहान चीन र नेपालका बीचमा विभिन्न समझदारीमा हस्ताक्षर हुनेछ । समझदारीको मस्यौदा भइसकेको छ भने शुक्रबार चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल आइपुगेपछि नेपालका प्रतिनिधिसमेत बसेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइनेछ ।
चीन र नेपालका बीचमा विभिन्न कनेक्टिभिटीमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ । यद्यपि के–के विषयमा समझदारी हुने भनेर अन्तिम टुङ्ग लागिसकेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दियो ।